Madhayamondi PCDs Ekubvisa kure machira Vagadziri uye Vatengesi China Diamond PCDs Yekubvisa kure machira Fekitori
2021 yazvino dhizaini 3 ″ ...
10, TGP Cup Daimondi G ...
7 padiki 24Seg.Turbo hasha ...
7 padiki Double Row Diamond G ...
4, Snail-zvechizarira Diamond ...
HTC PCD Daimondi Kukuya Bhutsu yeKutaka Kubvisa
PCD yekugeda mapedhi, yaishandiswa kubvisa mhando dzese dzekupfeka senge pendi pasi.Iine yakakwira inoshanda kune yakaoma mamiriro.Iyi PCD yekugaya pad ndeyeHTC muchina. Iyo inogona kukodzera ese epasirese-pasi pasi kukuya macines nevabati kana mushure mekugadzirisa. Isu tinopawo maitiro ekugadzirisa masevhisi.
Pamusoro Kugadzirira Chishandiso Redi Lock Husqvarna PCD Kukuya Shangu
Redi Lock Husqvarna PCD Kukuya Shangu kuti ubvise mhando dzese dzekupfeka senge screed masara, mastic pasi. Iine yakakwira inoshanda kune yakaoma mamiriro. Iyo PCD yedhaimani yekugedza pad ndeye Husqvarna muchina. Isu tinopawo mabasa ekugadzirisa kuti azadzise chero chinodikanwa chakakosha.
Lavina Konkrete Kugadzirira Maturusi PCD Kukuya Mupiro weEpoxy Glue Paint Kubvisa Kubvisa
PCD Kukuya Scraper kubvisa ese marudzi ekupfeka akadai epoxy, acrylic pasi.Sharp uye kupfeka nemishonga ine yakakwira inoshanda kune yakanyanya kuomarara mamiriro.Iyi yekugaya inokwenya ndeye Lavina muchina.Iyo inogona kukwana pasi rese-pasi pasi yekugeda michina ne vabati kana mushure mekugadzirisa.
PD50 PCD Daimondi Kukuya Plug yeKongiri Yepasi Yekumhanyisa Kubvisa
PCD Diamond Kukanda Plug kubvisa ese marudzi ekupfeka senge pendi, varnish pasi.Iine yakakwira inoshanda kune yakanyanya kuoma mamiriro.Broad renji yechisungo inowana hukuru kugona kwevhu kugadzirira.Aggressive uye inoshanda kune yekongiri pasi.Wet kana Dry shandisa.Provide maitiro ekugadzirisa.
3-M6 Trapezoid PCD Chikamu cheDhaimondi Kukuya Shangu
Trapezoid PCD Chikamu cheDhaimondi Kukanya Shangu kuti ubvise mhando dzese dzekushongedza: epoxy, pendi, glue, nezvimwewo zvine hunyanzvi hwakanyanya kune hwakaomesesa mamiriro acho. 3-M6 trapezoid daimondi shangu dzinogona kukodzera Sase, Diamatic uye ese marudzi epasi kukuya muchina Tinopawo maitiro ekugadzirisa masevhisi.
PCD Daimendi Chikamu Chikamu cheKongiri Pasi Pekugaya Hombodo dzeKuchenesa Kubvisa
PCD yekugeda mapedhi anoshandiswa kubvisa ese mhando yekupfeka senge nhema tira inonamira pasi.Sharp uye kupfeka-kuramba. Iine yakakwira inoshanda kune yakaoma mamiriro.Inogona kukodzera ese epasirese pasi kugaya macines ane akasiyana varidzi kana mushure mekugadzirisa. Isu tinopa maitiro ekugadzirisa.
Yakaparadzanisa PCD Isina Trapezoid Daimondi Kukuya Shangu
Split PCD Isina Trapezoid Daimondi Kukuya Shangu kuti ubvise mhando dzese dzekupfeka: epoxy, pendi, glue, nezvimwewo Zvakanakisa kugadzira maitiro, Split PCDs dzinogona kubvisa makobvu uye akadzika machena, zvinowedzera hasha uye nekukurumidza kukuya uye kubvisa iwo machira kubva kukongiri pasi Yakanakisa kubvisa chiyero.
5 Inch PCD Daimondi Inokuya Mukombe Wheel yeFloor Epoxy Kuchengeta Kubvisa
PCD kukuya kapu vhiri kuti ubvise mhando dzese dzekupfeka senge pendi, glue, epoxy pasi. Nehunyanzvi hwepamusoro kunyangwe pasi pemamiriro akaomesesa. Mhando dzakasiyana dzeconnetion dzakadai seM14, 22.23, 5/8 "-11 inogonesa kuti ishandiswe pane akasiyana mabrand angle grinder, saBosch, Makita nezvimwe
7inch 180mm PCD Daimondi Kukanda Mukombe mavhiri eEpoxy Kuchengeta Kubvisa
PCD kukuya kapu vhiri rinoshandiswa kubvisa kupfeka, epoxy, pendi, mastic kubva pasi. Iyo inopinza zvakanyanya uye ine hupenyu hwakareba hwakareba. Inoshanda zvakanyanya kunyangwe ichishanda mune yakaoma mamiriro. Makomba mazhinji akagadzirwa pachigadziko anoita kuti ive nehunyoro hwekubvisa guruva.
180mm Spilit PCD Diamond Floor Kukuya Disc
Spilit PCD Diamond Floor Kukuya Disc kuti ubvise ese marudzi ekunamira zvisaririra, kuenzanisa makomponi, varnish, glue, epoxy kupfeka..Split PCD inowedzera hasha kune gobvu coating.And chisungo chinogona kuchinjika kune rakaomarara pasi, yepakati pasi uye yakapfava pasi. Isu tinopawo mabasa ekugadzirisa.
10 ″ 250mm Concrete Floor vachikuya Plate PCD Kukuya Disc
250mm PCD Kukanda Plate kunogona kubvisa ese marudzi ekupfeka kubva kongiri pamusoro, senge epoxy, pendi, nezvimwewo Zvakanyanya kubvisa chiyero uye kusvibisa kugona.Very yakagadzikana.Any mhando dzinogona kugadzirwa kuti dzikwane pane akasiyana mabhureki epasi vachikuya michina. zvirinani kukwana pakati pechinhu chinokonzeresa nemuviri.
10, Blastrac Diamond Kukanda Plate Concrete Floor vachikuya disc
10 "Blastrac Diamond Kukanda Plate inopa kwakanyanya kushanda kuita mukugadzirira kwese kwepasi uye kupora. Inoshandiswa kukanda kongiri uye kubvisa pamusoro. Zvisungo zvakasiyana-siyana zvinowanikwa zvakaoma uye zvakapfava zvekuvakisa zvigadzirwa. Yakanaka kukuya disc yakakodzera. Inogona kukodzera paBlastrac Grinder kana ku be customized.